THE ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သော ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် ၁၀၀ စာရင်းတွင် တရုတ်ပြည်မကြီးတက္ကသိုလ် ၇ ခုပါဝင် - Xinhua News Agency
THE ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သော ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် ၁၀၀ စာရင်းတွင် တရုတ်ပြည်မကြီးတက္ကသိုလ် ၇ ခုပါဝင်
China Social, Education & Health မြန်မာ-中文
Social, Education & Health မြန်မာ-中文
လန်ဒန် ၊ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
Times Higher Education(THE)က အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်သော ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဂုဏ်သတင်းကျော်စောမှုအမြင့်ဆုံး ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် ၁၀၀ စာရင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံပြည်မကြီးမှ တက္ကသိုလ် ၇ ခု ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ယင်းတက္ကသိုလ် ၇ ခုထဲတွင် Tsinghua တက္ကသိုလ် နှင့် ပီကင်းတက္ကသိုလ်တို့သည် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၀ နှင့် အဆင့် ၁၅ တွင် အသီးသီးရပ်တည်နေပြီး အခြားတက္ကသိုလ် ၅ ခုမှာ Shanghai Jiao Tong တက္ကသိုလ် ၊
Zhejiang တက္ကသိုလ် ၊ Fudan တက္ကသိုလ် ၊ တရုတ်နိုင်ငံ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ် နှင့် နန်ကျင်း (Nanjing)တက္ကသိုလ် တို့ဖြစ်ကြသည်။
နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သော (THE)၏ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်အဆင့်စာရင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အကြီးတန်းပညာရှင်ပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော် နှင့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အလေးစားဆုံးခံရသော တက္ကသိုလ် ၂၀၀ ထဲမှ စစ်တမ်းကောက်ယူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံပြည်မကြီးရှိ တက္ကသိုလ်များအားလုံးသည် ယခင်နှစ်ကရရှိခဲ့သောအဆင့်အတိုင်း ၎င်းတို့၏ အဆင့်အသီးသီးတွင် ဒုတိယနှစ်အတွက် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်သစ် ၅ ခုသည် စာရင်းထဲတွင် ထပ်မံပါဝင်လာခဲ့ရာ ယင်းစာရင်းထဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံပြည်မကြီးမှ တက္ကသိုလ်စုစုပေါင်း ၁၇ ခုထိ စံချိန်တင်ပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
“ တရုတ်ပြည်မကြီးက တက္ကသိုလ်တွေဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ၁၀ ခုထဲမှာ ပါဝင်လာပါတယ်။ စာရင်းထဲက ရလဒ်တွေအရ သူ့ရဲ့အဆင့်မြင့်ပညာရေး မြင့်မားလာတာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သတိပြုမိစေပါတယ်” ဟု THE ၏ သုတအရာရှိချုပ် Phil Baty က Times Higher Education တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ တရုတ်ပြည်မကြီးက တက္ကသိုလ်တွေဟာ သင်ကြားရေးအပိုင်းမှာ ပိုပြီးစွဲဆောင်မှုရှိလာတာရယ် ကျောင်းသားတွေအတွက် လေ့ကျင့်မှုနဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းကို ပိုပြီး တွန်းအားပေးနိုင်တာရယ်ကြောင့် လာမယ့်မကြာခင်နှစ်တွေမှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ပညာရေးချိန်ခွင်လျှာဟာ ညီမျှလာတော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ ” ဟု ၎င်းကမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“ ဒါဟာ အရည်သွေးကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းစွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာ အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန် တက္ကသိုလ်တွေအတွက် ထည့်သွင်းရမယ့် ကိစ္စရပ်တွေ ဖြစ်လာရုံသာမကဘူး ကမ္ဘာ့စင်မြင့်ထက်မှာ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ ကျော်ကြားလွှမ်းမိုးမှုအပိုင်းအတွက်လည်း ဖြစ်လာပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံနှင့်ဒေသပေါင်း ၂၉ ခုမှ တက္ကသိုလ် ၂၀၂ ခုပါဝင်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် (Harvard University) က ထိပ်ဆုံးနေရာ၌ ဆက်လက်ရပ်တည်ထားနိုင်ကာ မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာသိပ္ပံ (Massachusetts Institute of Technology) နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ အော့စဖို့တက္ကသိုလ်တို့က ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၂ နှင့် အဆင့် ၃ နေရာများတွင် အသီးသီး ဆက်လက်ရပ်တည်နေကြောင်း သိရသည်။
“THE” သည် အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများကို ရေးသားဖော်ပြနေသည့် အထင်ကရ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်သည်။(Xinhua)
Chinese mainland claims7of world’s top 100 universities in latest THE ranking
LONDON, Oct. 27 (Xinhua) — Times Higher Education (THE) on Wednesday revealed its World Reputation Rankings 2021, in which seven of the world’s 100 most prestigious universities are from the Chinese mainland.
Of the seven, Tsinghua University and Peking University are ranked 10th and 15th respectively while the other five are Shanghai Jiao Tong University, Zhejiang University, Fudan University, University of Science and Technology of China and Nanjing University.
The annual list, compiled fromaglobally representative survey of more than 10,000 senior academics, highlights the world’s top 200 most prestigious universities.
All of the Chinese mainland’s universities that appeared in last year’s ranking either climb the table or hold onto their positions forasecond year, while five new universities appear in the ranking, giving the Chinese mainlandarecord 17 representatives in the table.
“(The) Chinese mainland’s breakthrough into the top 10 and its results across the table show that its excellence in higher education is increasingly coming to the notice of the wider world,” said Phil Baty, THE’s chief knowledge officer at Times Higher Education.
“That fact means we could seeashift in the balance of power in global higher education over the coming years as (the) Chinese mainland becomesamore attractive proposition for academics and students to work and study,” he noted. “This could not only cause issues for the likes of the U.S. and (the) UK in terms of attracting talent(s), but also funding and prestige on the world stage,” he said.
The ranking, comprising 202 universities from 29 countries and regions, sees Harvard University in the United States retain its position at the very top of the table, with Massachusetts Institute of Technology retaining the second place and Britain’s University of Oxford climbing two places to the third.
THE isamagazine reporting specifically on news and issues related to higher education. Enditem
BEIJING, May 11, 2021 (Xinhua) — Graduates attend the 2019 commencement ceremony of Tsinghua University held in Beijing, capital of China, July 7, 2019. (Xinhua/Ju Huanzong)
တရုတ်နိုင်ငံ ဟဲနန်ပြည်နယ်၌ ရွှေတွင်းကြီးရှာဖွေတွေ့ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်းကျန်းဒေသ၏ ဝါခင်း စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်း